MA LEEYIHIIN MADAXBADKA SAXIIXA SAXIIXA?
Warshadaha dhijitaalka 'Digital Signage' ayaa si isdaba joog ah u koraya sanadba sanadka. Marka la gaaro sanadka 2023 suuqa Digital Signage waxaa lagu wadaa inuu kobco $ 32.84 Bilyan. Teknolojiyada taabashada ee 'Touch Screen' waa qayb si xawli ah u koraya ee riixaya suuqa Digital Signage xitaa sii sii dheereeya. Dhaqan ahaan loo isticmaalay Shaashadda Teknolojiga Farsamada Gacanta ee loo yaqaan 'Infidred Touch Screen Screenwa' ayaa lagu isticmaalay barnaamijyada ganacsiga. Si kastaba ha noqotee tikniyoolajiyad cusub oo is-dhexgal ee Capacitive ee loo adeegsado taleefannada casriga ah ayaa loo istcimaalay iyadoo ay hoos u dhacday kharashaadkii wax soo saarkii. Adduunyo ay ka buuxaan qalabka casriga ah ee taabashada taabashada ah ee 'Screen Screen' iyo kiniiniyada qaarkood ayaa saadaaliyay in Touch Screens ay mustaqbal u yihiin warshadaha Digital Signage. Blog-gaan waxaan ku baari doonaa inay taasi tahay kiiska iyo in kale. Warshadaha tafaariiqda ayaa ka badan afar meelood meel iibka Digital Signage laakiin warshadaha lafteeda ayaa maraya wakhti dhibaato badan. Dukaamaysiga khadka tooska ahi wuxuu carqaladeeyey tafaariiqda oo dhibaato ku keenay jidka weyn. Iyada oo ay sidaas tahay dukaamanka iibka iibka sida tartanku waa in ay beddelaan qaabkooda si ay macaamiisha ugala baxaan guryahooda iyo dukaamada. Shaashadda taabashada (Screens Screens) waa hal dariiqo oo ay tan ku sameyn karaan tan, “Screens Screens” ayaa loo adeegsan karaa si loogu caawiyo macaamiisha inay helaan / dalbadaan alaabada ayna isbarbar dhigaan waxyaabaha si qoto dheer ah tusaale ahaan. Adigoo isticmaalaya bandhigyo sida Kiosks-yada Shaashadda ee PCAP waxay noqon karaan kuwo dheeri ah oo ku saabsan sida ay macaamiisha ula kulmayaan magacyadooda casriga ah iyo kombuyuutarrada. Tikniyoolajiyadda noocan ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu siiyo macaamiisha khibrad shaqsiyadeed oo dheeraad ah isla markaana ay uga dhigto inay ku sii mashquulsanaadaan badeecadooda iyo sumadda. Hal-abuurnimada ayaa ah halka ay tafaariiqleyaashu runtii wax ka beddeli karaan, oo ay ku jiraan soo-bandhigyo u gaar ah sida Muuqaalada Shaashadda PCAP Touch ay u abuuri karaan waaya-aragnimo ay macaamiisha kaliya ku heli karaan markay dukaanka soo galaan.
Mid ka mid ah wershadaha kaas oo Digital Signage ay u beddeleyso waaxdooda waa makhaayadaha Adeegga Degdegga ah (QSR). Suuqyada hormuudka u ah suuqa QSR sida McDonalds, Burger King iyo KFC waxay bilaabeen inay ku baahiyaan boodhadhka Dijital ah iyo Shaashadda iskaa-u-shaqeynta Iskuulada. Makhaayadaha waxay arkeen faa iidooyinka nidaamkan maadaama macaamiisha u janjeeraan inay dalbadaan cunno badan markii aysan laheyn cadaadiska waqtigaas; taasoo keentay faa iidooyin badan. Macaamiil badan ayaa sidoo kale jecel noocyada noocaan ah 'Screens Screens' maxaa yeelay guud ahaan maahan inay sugaan waqti aad u dheer in amarkooda la qaado isla markaana aaney dareemin cadaadis si dhaqsi leh sida ay tahay markay taagan yihiin miiska. Maaddaama barnaamijku amro inuu noqdo mid la heli karo waxaan saadaalinayaa in taabashada taabashada taabashada ee Screens Screens ay goor dhow noqon doonto heer ay ku xirnaadaan silsilado cunto oo degdeg ah
In kasta oo saamiga suuqa ee taabashada taabashada ee 'Screens Screens' ay ku dhex leeyihiin warshadaha Dijitaalka 'Digital Signage' ayaa sii kordhaya halkaas dhawr arrimood oo dib u dhigay hadda. Arrinta ugu weyn ayaa ah abuurista tusmada. Abuuritaanka taabashada taabashada ee shaashada ah ma fududaan / dhakhso mana aha inay ahaato. U adeegsiga bartaada internetka ee Shaashadda taabashada ma ahan daruuri inuu keenayo faa'iidooyinka aad rabto haddii aadan abuurin waxyaabo ku habboon muujinta shaashadda loojeedo ujeedo laga leeyahay mooyee. Abuuritaanka maaddadan waxay noqon kartaa waqti qaadasho iyo qaali. Qiimahayaga taabashada ah ee taabashada taabashada leh ee CMS ayaa ah mid u oggolaanaya dadka isticmaala inay abuuraan oo ay maareeyaan waxyaabaha loogu talagalay 'Screens Screens'. Digital Signage AI ayaa la saadaalinayaa inay tahay isbeddel kale oo weyn oo ka dhex jira wershadaha kaas oo meesha ka saari kara diiradda ka qaadashada taabashada "Screens Screens", iyadoo loo ballanqaaday waxyaabo firfircoon oo suuqgeyn toos ah loogu iibinayo kooxaha macaamiisha gaarka ah. Shaashada 'Screens Screens' laftooda ayaa dhawaanahan uruurinayay warbaahin taban, laga soo bilaabo eedeymo muujinaya taxadar la'aan ilaa iyo sheegashooyinka iswada oo si aan caddaalad aheyn u qaadanaya shaqooyinka.
Shaashadaha taabashada ah waxay qayb weyn ka noqon doonaan mustaqbalka warshadaha dhijitaalka ah, faa iidooyinka badan ee tikniyoolajiyadan is dhexgalka waxay kicin doontaa warshadaha guud ahaan. Maaddaama abuuritaanka maadooyinka taabashada ee taabashada taabashada taabashada ee 'Screens Screens' ay u sii kordhayaan una noqdaan kuwa loo heli karo SMEs kobcinta taabashada "Screens Screens" waxay awoodi doontaa inay sii waddo horumarinteeda cajiibka ah. Hase yeeshe ma aaminsani in taabashada taabashada ee 'Screens Screens' ay yihiin mustaqbal, iyagoo kaashanaya kuwa aan la falgalineynin dhijitaalka 'Digital Signage' inkasta oo ay midba midka kale ugu bogaadiyo dhammaan xallinta calaamadaha.